ဗိုငျနယျလျဒမျနရောအစားထိုးမယျ့ ကလော့ပျရဲ့ ဝှကျဖဲက အာဂငျြတီးနားသားလား ဂြာမနျသားလား ? – Sports A2Z
ဗိုငျနယျလျဒမျနရောအစားထိုးမယျ့ ကလော့ပျရဲ့ ဝှကျဖဲက အာဂငျြတီးနားသားလား ဂြာမနျသားလား ?
လီဗာပူးလျနညျးပွယာဂငျ ကလော့ပျအတှကျ လကျရှိမှာ ခေါငျးအကိုကျဆုံးပွဿနာဖွဈနတောက ဂီနီ ဗိုငျနယျလျဒမျထှကျသှားတဲ့ ကှငျးလယျနရောကို ဘယျသူနဲ့ အစားထိုးမလဲဆိုတာပါ။ အခြိနျတနျရငျတော့ ဂြာမနျသားကွီးက သူ့ရဲ့ဝှကျဖဲတှကေို အောငျအောငျမွငျမွငျ ထုတျပွလရှေိ့တာကလညျး ရှမှေ့ာ သငျခနျးစာတှေ ရှိခဲ့ပွီးပါပွီ။
လတျတလောအခွအေနမှော လီဗာပူးလျရဲ့ အပွောငျးအရှလှေု့ပျရှားမှုခွရောတှကေို တကှကျခငျြး တခုခငျြး စူးစမျးကွညျ့နရေတာကိုက အရသာတခုအနနေဲ့ စိတျဝငျစားစရာကောငျးနပွေီး တကယျတမျးမှာတော့ ဗိုငျနယျလျဒမျ မရှိလညျး အလုံးအရပျမလြော့တဲ့ ကှငျးလယျကို တညျဆောကျဖို့က သူ့အနနေဲ့ ကွိုတငျကွံစညျရငျး ပွငျဆငျထားပွီးလောကျတဲ့ အခွအေနဖွေဈပါတယျ။
လီဗာပူးလျရဲ့ အပွောငျးအရှထေုံ့းစံတခုက လူမသိ၊ သိပျမထငျရှားလှတဲ့ ရှကျပုနျးသီးလူငယျလေးတှကေို စငျတျောကောကျခွငျးဖွဈပွီး အသငျးရဲ့ အနာဂတျစီမံကိနျးကို နုပြိုလှတဲ့ လူစာရငျးနဲ့သာ ရရှေညျအထိုငျခသြှားမယျလို့ မိုကျကယျအကျဒျဝကျနဲ့ ကလော့ပျတို့ရဲ့ လကျဝါးရိုကျမှုမှာ ဘိုငျယနျကပွောငျးလာတဲ့ အသကျ ၂၉ နှဈသား ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကှငျးလယျလူ သီယာဂို အယျလျကနျတာရာကတော့ ခွှငျးခကျြဖွဈခဲ့တယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာလညျး အယျလျကနျတာရာကို ချေါယူခဲ့တဲ့ လမျးစဉျအတိုငျး ကလော့ပျကွံစညျနတောက မကျဆီရဲ့ အာဂငျြတီးနားလကျရှေးစငျအသငျးဖျောဖွဈတဲ့ အသကျ ၂၇ နှဈအရှယျ ကှငျးလယျလူ ရိုဒရီ ဒီပေါလျကို ချေါယူဖို့ပါ။ သူက ပုံရိပျမကွီးမားလှသလို လီဗာပူးလျနဲ့ သတငျးထှကျခဲ့တာလညျး တကွိမျလားသာရှိခဲ့တယျ။
အဆိုပါ အူဒီနီးဈကှငျးလယျလူနဲ့ ပတျသကျရငျ ပွောစရာနှဈခကျြ ရှိနတေယျ။ ပထမအခကျြက ဗိုငျနယျဒမျနဲ့ စှမျးဆောငျရညျခငျြး နှိုငျးယှဉျလိုကျရငျ စီးရီးအမှော ကစားထားတဲ့ သူ့ရဲ့အခကျြအလကျမှတျတမျးတခြို့က ပိုသာလှနျနတောကို တှရေ့တယျ။ သူက ပွီးခဲ့တဲ့စီးရီးအရောသီမှာ ၉ ဂိုးသှငျး၊ ၉ ဂိုးဖနျတီးထားသူဖွဈပါတယျ။
ကလော့ပျရဲ့အသငျးမှာ ကှငျးလယျလူတယောကျရဲ့ တာဝနျက တိုကျစဈလိုကျတကျသှားတဲ့ နောကျခံအစှနျလူတှေ လှဈဟာခဲ့တဲ့ ခံစဈယိုပေါကျကို ထိနျးထားပေးရတဲ့တပွိုငျနကျမှာ တသငျးလုံးရဲ့ အလုံးစုံတိုကျစဈမောငျးနှငျအားကို တှနျးနှိုးပေးဖို့ဖွဈတယျ။ ဒီအခကျြအရ သူက ဗိုငျနယျလျဒမျရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့အောငျမွငျမှု ၉၂.၅ ရာခိုငျနှုနျးမှာ လိုကျမီထားခွငျးတော့ မရှိဘူး။
လုပျအားနှုနျးပိုငျးမှာ ကလော့ပျရဲ့ တောငျးဆိုမှုပိုငျးအရ ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ ” ကြှနျတျောက ကားတာယာအပိုလိုပါပဲ။ အဓိကကစားသမားတှကေို ဖွညျ့ကစားပေးဖို့ပါ ” ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့စကားနဲ့အညီ မိနဈ ၉၀ အတှငျးမှာ ဘောလုံးဖကျြထုတျမှုအပိုငျး၊ ဘောလုံးထိခကျြအပိုငျးတှကေ ဗိုငျနယျဒမျထကျသာလှနျနတေယျ။
အသငျးတသငျးလုံးကို မောငျးနှငျမှုအပိုငျးရော၊ ဟာကှကျဖွညျ့မှုအပိုငျးမှာ ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျနတောကို တှရေ့တာက ထငျမှတျမထားတဲ့ ကလော့ပျရဲ့မကျြလှညျ့တခုအနနေဲ့ သူ့ကို အနျဖီးလျမှာ မွငျတှရေ့ဖို့လညျး အလားအလာကောငျးနပေါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ရိုးမားရဲ့ လိုရနျဇို ပယျလီဂရီနီ၊ လကျစတာရဲ့ ယူရီ တိုငျလီမနျးဈနဲ့ ဘရိုကျတနျအသငျးရဲ့ Yves Bissouma တို့လို ကှငျးလယျလူတှကေို တောကျလြှောကျခြိတျဆကျနပေါတယျလို့ သတငျးတှပွေေးနတေဲ့ ကလော့ပျရဲ့ နောကျထပျရှကှေ့ကျတခုက မိုခနျြဂလာဘတျက ကှငျးလယျလူ ဖလိုရီယနျ နှိုငျဟောကျဈပါ။
လကျရှိဂြာမနီအသငျးနဲ့ ယူရိုပွိုငျပှဲဝငျနတေဲ့ အသကျ ၂၄ နှဈသားကို ကလော့ပျရဲ့ ကငျးထောကျအဖှဲ့က အထူးစောငျ့ကွညျ့နသေလို ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ ၃၄ သနျးဆိုတာက ပေးဖို့ လုံလောကျနခြေိနျမှာ နာဘီ ကီတာ၊ သီယာဂို အယျလျကနျတာရာတို့လို ဘှနျဒကျလီဂါကစားသမားတှကေ ကလော့ပျရဲ့အသငျးမှာ ခကျြခငျြး အံမဝငျနိုငျတဲ့ ပွဿနာကိုတော့ ရှငျးထုတျရမှာပါ။
သူ့ကို ချေါယူနိုငျခဲ့ရငျတော့ ဂိုးသမား ကားရီးယကျဈအပွီးမှာ လီဗာပူးလျအတှကျ ကလော့ပျစုဆောငျးခဲ့တဲ့ ဒုတိယမွောကျ ဂြာမနျကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျမှာဖွဈသလို ဗိုငျနယျဒမျရဲ့တာဝနျကို အပွညျ့အဝယူပေးနိုငျစှမျးရှိတဲ့ ကစားပုံက လီဗာပူးလျရဲ့ မှတျစုစာအုပျမှာ မှတျကြောကျတငျခံပွီးဖွဈလို့ အာဂငျြတီးနားသားနဲ့ ဂြာမနျသားနှဈဦးလုံးကို ကလော့ပျက တပွိုငျနကျတညျး ချေါယူသှားမယျ့ လြှို့ဝှကျခွလှေမျးတှကေို ရငျခုနျသံမွနျမွနျနဲ့ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ဖို့ တငျဆကျပေးလိုကျရပါကွောငျး…….။
လီဗာပူးလ်နည်းပြယာဂင် ကလော့ပ်အတွက် လက်ရှိမှာ ခေါင်းအကိုက်ဆုံးပြဿနာဖြစ်နေတာက ဂီနီ ဗိုင်နယ်လ်ဒမ်ထွက်သွားတဲ့ ကွင်းလယ်နေရာကို ဘယ်သူနဲ့ အစားထိုးမလဲဆိုတာပါ။ အချိန်တန်ရင်တော့ ဂျာမန်သားကြီးက သူ့ရဲ့ဝှက်ဖဲတွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် ထုတ်ပြလေ့ရှိတာကလည်း ရှေ့မှာ သင်ခန်းစာတွေ ရှိခဲ့ပြီးပါပြီ။
လတ်တလောအခြေအနေမှာ လီဗာပူးလ်ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့လှုပ်ရှားမှုခြေရာတွေကို တကွက်ချင်း တခုချင်း စူးစမ်းကြည့်နေရတာကိုက အရသာတခုအနေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီး တကယ်တမ်းမှာတော့ ဗိုင်နယ်လ်ဒမ် မရှိလည်း အလုံးအရပ်မလျော့တဲ့ ကွင်းလယ်ကို တည်ဆောက်ဖို့က သူ့အနေနဲ့ ကြိုတင်ကြံစည်ရင်း ပြင်ဆင်ထားပြီးလောက်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးလ်ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ထုံးစံတခုက လူမသိ၊ သိပ်မထင်ရှားလှတဲ့ ရွက်ပုန်းသီးလူငယ်လေးတွေကို စင်တော်ကောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အသင်းရဲ့ အနာဂတ်စီမံကိန်းကို နုပျိုလှတဲ့ လူစာရင်းနဲ့သာ ရေရှည်အထိုင်ချသွားမယ်လို့ မိုက်ကယ်အက်ဒ်ဝက်နဲ့ ကလော့ပ်တို့ရဲ့ လက်ဝါးရိုက်မှုမှာ ဘိုင်ယန်ကပြောင်းလာတဲ့ အသက် ၂၉ နှစ်သား ကမ္ဘာ့အဆင့်ကွင်းလယ်လူ သီယာဂို အယ်လ်ကန်တာရာကတော့ ခြွင်းချက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာလည်း အယ်လ်ကန်တာရာကို ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း ကလော့ပ်ကြံစည်နေတာက မက်ဆီရဲ့ အာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်အသင်းဖော်ဖြစ်တဲ့ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ကွင်းလယ်လူ ရိုဒရီ ဒီပေါလ်ကို ခေါ်ယူဖို့ပါ။ သူက ပုံရိပ်မကြီးမားလှသလို လီဗာပူးလ်နဲ့ သတင်းထွက်ခဲ့တာလည်း တကြိမ်လားသာရှိခဲ့တယ်။
အဆိုပါ အူဒီနီးစ်ကွင်းလယ်လူနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပြောစရာနှစ်ချက် ရှိနေတယ်။ ပထမအချက်က ဗိုင်နယ်ဒမ်နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ချင်း နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် စီးရီးအေမှာ ကစားထားတဲ့ သူ့ရဲ့အချက်အလက်မှတ်တမ်းတချို့က ပိုသာလွန်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ သူက ပြီးခဲ့တဲ့စီးရီးအေရာသီမှာ ၉ ဂိုးသွင်း၊ ၉ ဂိုးဖန်တီးထားသူဖြစ်ပါတယ်။
ကလော့ပ်ရဲ့အသင်းမှာ ကွင်းလယ်လူတယောက်ရဲ့ တာဝန်က တိုက်စစ်လိုက်တက်သွားတဲ့ နောက်ခံအစွန်လူတွေ လှစ်ဟာခဲ့တဲ့ ခံစစ်ယိုပေါက်ကို ထိန်းထားပေးရတဲ့တပြိုင်နက်မှာ တသင်းလုံးရဲ့ အလုံးစုံတိုက်စစ်မောင်းနှင်အားကို တွန်းနှိုးပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီအချက်အရ သူက ဗိုင်နယ်လ်ဒမ်ရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့အောင်မြင်မှု ၉၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ လိုက်မီထားခြင်းတော့ မရှိဘူး။
လုပ်အားနှုန်းပိုင်းမှာ ကလော့ပ်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုပိုင်းအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ” ကျွန်တော်က ကားတာယာအပိုလိုပါပဲ။ အဓိကကစားသမားတွေကို ဖြည့်ကစားပေးဖို့ပါ ” ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့စကားနဲ့အညီ မိနစ် ၉၀ အတွင်းမှာ ဘောလုံးဖျက်ထုတ်မှုအပိုင်း၊ ဘောလုံးထိချက်အပိုင်းတွေက ဗိုင်နယ်ဒမ်ထက်သာလွန်နေတယ်။
အသင်းတသင်းလုံးကို မောင်းနှင်မှုအပိုင်းရော၊ ဟာကွက်ဖြည့်မှုအပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်နေတာကို တွေ့ရတာက ထင်မှတ်မထားတဲ့ ကလော့ပ်ရဲ့မျက်လှည့်တခုအနေနဲ့ သူ့ကို အန်ဖီးလ်မှာ မြင်တွေ့ရဖို့လည်း အလားအလာကောင်းနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရိုးမားရဲ့ လိုရန်ဇို ပယ်လီဂရီနီ၊ လက်စတာရဲ့ ယူရီ တိုင်လီမန်းစ်နဲ့ ဘရိုက်တန်အသင်းရဲ့ Yves Bissouma တို့လို ကွင်းလယ်လူတွေကို တောက်လျှောက်ချိတ်ဆက်နေပါတယ်လို့ သတင်းတွေပြေးနေတဲ့ ကလော့ပ်ရဲ့ နောက်ထပ်ရွှေ့ကွက်တခုက မိုချန်ဂလာဘတ်က ကွင်းလယ်လူ ဖလိုရီယန် နွိုင်ဟောက်စ်ပါ။
လက်ရှိဂျာမနီအသင်းနဲ့ ယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်သားကို ကလော့ပ်ရဲ့ ကင်းထောက်အဖွဲ့က အထူးစောင့်ကြည့်နေသလို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၃၄ သန်းဆိုတာက ပေးဖို့ လုံလောက်နေချိန်မှာ နာဘီ ကီတာ၊ သီယာဂို အယ်လ်ကန်တာရာတို့လို ဘွန်ဒက်လီဂါကစားသမားတွေက ကလော့ပ်ရဲ့အသင်းမှာ ချက်ချင်း အံမဝင်နိုင်တဲ့ ပြဿနာကိုတော့ ရှင်းထုတ်ရမှာပါ။
သူ့ကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ရင်တော့ ဂိုးသမား ကားရီးယက်စ်အပြီးမှာ လီဗာပူးလ်အတွက် ကလော့ပ်စုဆောင်းခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက် ဂျာမန်ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်မှာဖြစ်သလို ဗိုင်နယ်ဒမ်ရဲ့တာဝန်ကို အပြည့်အဝယူပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကစားပုံက လီဗာပူးလ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်မှာ မှတ်ကျောက်တင်ခံပြီးဖြစ်လို့ အာဂျင်တီးနားသားနဲ့ ဂျာမန်သားနှစ်ဦးလုံးကို ကလော့ပ်က တပြိုင်နက်တည်း ခေါ်ယူသွားမယ့် လျှို့ဝှက်ခြေလှမ်းတွေကို ရင်ခုန်သံမြန်မြန်နဲ့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါကြောင်း…….။
ခနျြပီယံလိဂျဖလားဟာ မိမိနဲ့လညျး ထိုကျတနျတယျလို့ တူဟယျလျဆီက မတောငျးဆိုဝံ့ကွောငျး ရငျဖှငျ့သှားခဲ့တဲ့ လမျးပတျ
တူဟယျလျရဲ့ သဲသဲလှုပျ လိုခငျြနတေဲ့ ဟာကီမီကို ချေါယူဖို့ အရှိနျမွှငျ့ကွိုးပမျးလာတဲ့ ခြဲလျဆီး